Eyona 44 imidlalo yebhodi yabantwana ngokweminyaka | Ndinike ixesha lokuphumla
UIsake | 17/12/2021 17:48 | Ukuhlaziywa ukuba 21/12/2021 09:01 | ngokubanzi
Xa ukhetha imidlalo yebhodi ehlekisayo yabantwana, izinto ezininzi kufuneka zithathelwe ingqalelo. Kwelinye icala, ubudala obufanelekileyo obuyilelwe loo mdlalo. Omnye umbuzo ngowokuba uza kudlala yedwa na okanye nabanye abantwana, okanye uza kudlala nabazali bakhe okanye abantu abadala na, ekubeni kukwakho. imidlalo yebhodi eyenzelwe wonke umntu. Kwaye, ewe, ukuba umdlalo uyafundisa kwaye uyonwabisa, kungcono kakhulu.
Kwesi sikhokelo uya kuba nayo yonke imathiriyeli oyifunayo khetha eyona ilungileyo imidlalo yebhodi yabantwana, ukongeza nokuba necandelo elikhethekileyo lemidlalo yebhodi yemfundo. Eyona ndlela isempilweni kakhulu kunye nentlalontle ngakumbi kwii-consoles kunye nemidlalo yevidiyo. Bade bacetyiswe ziingcali ekuphuhliseni umntwana omncinci, ekubeni bahlakulela izakhono ezifanelekileyo zemoto, ukujonga, umbono wendawo, ukugxila, ukucinga kunye nobuchule, ukwenza izigqibo, njl. Ngaphandle kwamathandabuzo isipho esikhulu ...
1 Imidlalo yebhodi ethengiswa kakhulu yabantwana
1.1 Imidlalo yeTrajins-Virus
1.5 Ukufundisa - Lynx
2 Eyona midlalo yebhodi ingcono yabantwana ngokweminyaka
2.1 Kubantwana abasusela kwiminyaka emi-2 ukuya kwengama-3 ubudala
2.1.1 Goula Iihagu ezi-3 ezincinci
2.1.2 Diset ndifunda ngemifanekiso
2.1.3 IMBOTYI Adela inyosi
2.1.4 IBEAN Isiqhamo sokuqala
2.1.5 IFalomir Spike Pirate
2.2 Kubantwana abasusela kwiminyaka emi-4 ukuya kwengama-5 ubudala
2.2.1 Ungavuki tata!
2.2.2 UHasbro unenkani
2.2.4 UGoliyati Anton Zampon
2.2.5 Imihlathi kaGoliyati
2.2.9 ULúlido Grabolo Omnci.
2.2.10 Falomir ndiyintoni?
2.3 Imidlalo yebhodi yabantwana abaphakathi kweminyaka emi-6 kunye ne-12 ubudala
2.3.6 Inqaba yoloyiko
2.3.9 Hasbro Ngubani?
2.4.1 Indlu yesiporho
2.4.2 Umgibe wetempile
2.4.3 Irhamncwa lombala
2.5 Imidlalo yebhodi yabantwana kunye nabantu abadala
2.5.1 Iphazili ye-500
2.5.2 Iphazili ye-3D yeSixokelelwano seSolar
2.5.3 Itafile yemidlalo emininzi
2.5.6 Yibethe loo nto!
2.5.8 Hasbro Izijekulo
3 Isikhokelo sokuthenga umdlalo webhodi kubantwana
3.1 Ubuncinane obucetyiswayo
3.4 Ukuphatheka kunye nocwangco
Imidlalo yebhodi ethengiswa kakhulu yabantwana
Phakathi kwabathengisi abagqwesileyo, okanye imidlalo yebhodi yabantwana ithengiswa kakhulu kwaye iphumelele, ibe kuloo nqanaba lokuthengisa ngenxa yezizathu ezicacileyo. Zezona zithandwa kakhulu, kwaye ziyaziwa kakhulu, ke kufuneka zigxininiswe ngokukodwa:
Imidlalo yeTranji-Virus! -...
Yenye yezona zithengiswa kakhulu, kwaye ayincinci. Ngumdlalo wabadlali aba-2, ukusuka kwi-8 yeminyaka kwaye ilungele usapho lonke. Iyalutha kwaye iyonwabisa kakhulu, kulula ukuyihambisa, kwaye apho kuya kufuneka ujongane nentsholongwane ekhutshiweyo. Khuphisana ukunqanda ubhubhane kwaye ube ngowokuqala ukuphelisa iintsholongwane ngokuzibekela bucala umzimba osempilweni ukunqanda ukusasazeka kwezifo ezoyikekayo.
Ngomnye wemidlalo yebhodi yekhadi eqinisekileyo yabancinci nabadala. Idlalwa ngokujika kunye nemijikelo, kunye nejika elilula lokufunda ukuze ukwazi ukudlala kwasekuqaleni. Ukongeza, ikwanecandelo lezemfundo, elinamanani ukuya kuthi ga kwi-100 anamanani ama-2 ukuziqhelanisa nokubala, nokubala ukujonga okunokwenzeka.
Ukusukela kwiminyaka eyi-6 unalo omnye umdlalo phakathi kwabathengisi abagqwesileyo. Umdlalo webhodi ofanelekileyo kumntu wonke, ngakumbi kumaqela. Kuya kufuneka ubonise izakhono zesantya, ukujonga kunye ne-reflexes, ukufumana iisimboli ezifanayo. Ukongeza, ibandakanya 5 minigames ezongezelelweyo.
Libellud Dixit yoqobo -...
Inokudlalwa ukususela kwiminyaka eyi-8, kwaye inokuba yeyosapho lonke. Ngaphezulu kwe-1.5 yezigidi zeekopi ezithengisiweyo kunye neembasa ezininzi zamazwe ngamazwe ngamakhadi okufowuna alo mdlalo. Udumo lwakhe lufanelekile. Inamakhadi angama-84 anemizobo emihle, ekufuneka uyichaze ukuze umntu osebenza naye aqikelele, kodwa ngaphandle kokuba abanye abachasi bayenze loo nto.
Ukufundisa - Lynx
Ukususela kwiminyaka eyi-6 unalo mdlalo webhodi ukuze uphucule i-reflexes kunye ne-visual acuity, oko kukuthi, ukuba yi-lynx. Ibandakanya iindlela ezininzi zokudlala, kufuneka ufumane imifanekiso yakho ebhodini ngaphambili kwaye ufumane elona nani liphezulu leethayile ezinokwenzeka.
Eyona midlalo yebhodi ingcono yabantwana ngokweminyaka
Ukukunceda ungene abakhethiweyo, ngenxa yobuninzi bemidlalo yebhodi yabantwana ekhoyo. Zikhona kuyo yonke iminyaka nakuzo zonke izinto ezithandwayo, imixholo, uthotho lweekhathuni, kusapho lonke, njl. Apha uneendidi ezininzi ezahlulwe ngobudala okanye umxholo:
Kubantwana abasusela kwiminyaka emi-2 ukuya kwengama-3 ubudala
Lo ngomnye weyona migca ithambileyo, kuba ingeyiyo nayiphi na imidlalo yebhodi elungelelanisiweyo kwaba bancinci, kwaye kufuneka kuthathelwe ingqalelo ekhethekileyo ukuqinisekisa ukuba bakhuselekile. Ngokomzekelo, kufuneka bakhuseleke, bangabi namalungu amancinci anokuginywa, okanye abukhali, kwaye iziqulatho kunye nenqanaba kufuneka zibe kubude bamancinci. Kwelinye icala, kufuneka badibane neempawu ezithile ezinjengokubetha ngokubonakalayo, kulula, kugxilwe ekuphuculeni izakhono ezinje ngezakhono zemoto, izakhono zokubonwayo, njl. Abanye iingcebiso ezisebenzayo imidlalo yebhodi kubantwana abaneminyaka emi-2 ukuya kwemi-3 Zizo:
Goula Iihagu ezi-3 ezincinci
Goula- Umdlalo we-3 ...
Ibali elidumileyo leeHagu ezi-3 ezincinci zajika zaba ngumdlalo webhodi wabancinci. Ngokunokwenzeka ukudlala kwimo yentsebenziswano okanye yokhuphiswano. Inokudlalwa kunye 1 ukuba 4 abadlali, kwaye ukhonza ukuphuhlisa amaxabiso ezahlukeneyo. Ngokuphathelele injongo, kukho ibhodi enoluhlu lweethayile, indlu encinci, kwaye kuya kufuneka bathathe iithayile zayo nayiphi na ihagu endlwini ngaphambi kokuba ingcuka ifike.
Thenga iihagu eziNtathu ezincinci
Diset ndifunda ngemifanekiso
I-Diset-Lectron ndiyayifunda ...
Omnye umdlalo wokufundisa wabantwana abaneminyaka emi-3 ubudala ozama ukudibanisa imibuzo kunye neempendulo. Baza konwaba ngelixa bephucula izakhono ezinje ngezakhono zokubonwayo, ukwahlula iimilo, imibala, njl. Inamakhadi kwizihloko ezahlukahlukeneyo kunye nenkqubo yokuzilungisa ukwenzela ukuba omncinci akwazi ukujonga ukuba uphendule ngokuchanekileyo ngenxa yepensile yomlingo ekhanyisayo kwaye ikhupha isandi.
Thenga ndifunda ngemifanekiso
IMBOTYI Adela inyosi
Inyosi yaseMaya ayinguye yedwa owaziwayo. Ngoku kuza lo mdlalo webhodi omangalisayo wabantwana ukusuka kwiminyaka emi-2 ubudala. Ingu-Adela inyosi, eya kutsala ingqalelo yabancinci ngombala wayo kunye nenjongo yokuqokelela i-nectar kwiintyatyambo kunye nokuyisa kwi-hive kwaye ngaloo ndlela ikwazi ukwenza ubusi. Xa imbiza yobusi igcwele, uyaphumelela. Indlela yokuqinisa ingqiqo yobunye, ukuqonda kunye nokufunda imibala.
Thenga uAdela the Bee
IBEAN Isiqhamo sokuqala
Umdlalo wabantwana ukusuka kwi-2 iminyaka. Ukubuyiswa kweklasikhi, njenge-El Frutal, kodwa yenzelwe abancinci, ukulungelelanisa imithetho kubo kunye nokuququzelela ifomathi. Indlela yokuphucula izakhono zemoto kunye nentsebenziswano, ekubeni kufuneka uphumelele kunye, kwaye ngenxa yoko kuya kufuneka ubethe i-crow, engafanele idle isiqhamo.
Thenga isiqhamo sokuqala
IFalomir Spike Pirate
Falomir- Cofa iPirate ...
Lo ngomnye umdlalo ohlekisayo wabantwana ukusuka kwiminyaka emi-3 ubudala. Inesiseko apho ubeka khona umgqomo, apho i-pirate iya kwaziswa khona kwaye ayiyi kwaziwa xa iya kuxhuma. Ibandakanya ukuqhuba amakrele emgqomeni ngokulandelelana, kwaye owokuqala ukwenza i-pirate jump iya kuphumelela.
Thenga iPirate yePirate
Kubantwana abasusela kwiminyaka emi-4 ukuya kwengama-5 ubudala
Ukuba abantwana badala, imidlalo yabantwana abancinci iya kuba yinto yabantwana kwaye iyadika. Bafuna imidlalo ethile egxininise ekuphuculeni ezinye iintlobo zezakhono, njengokucinga ngobuchule, ukugxila, inkumbulo, njl. Ezo abantwana abangaphantsi kweminyaka emi-5 ubudala, unokufumana imidlalo yebhodi enomdla kakhulu yabantwana kwimarike:
UGoliyati-Musa ukuvuka ...
Umdlalo onika umdla wabantwana abaneminyaka emi-5 apho kufuneka bajikeleze ivili le-roulette kwaye badlulele kwibhodi. Kodwa kuya kufuneka bayenze ngobuchwephesha, ekubeni uTata elele ebhedini kwaye ukuba wenza ingxolo uya kumvusa akuthumele ebhedini (ubuyele kwindawo yokuqala yebhodi).
Thenga Ungavuki tata
Imidlalo yeHasbro 48380B09 ...
Ngumdlalo webhodi owenzelwe abantwana ukusuka kwiminyaka emi-4 ubudala. Idonki ethe khunubembe kakhulu ekhaba kwaye iwujule wonke umthwalo, xa ikhaba, ithamsanqa liyabaleka, yonke into oyibekileyo itsibela emoyeni. Lo mdlalo unamanqanaba ama-3 obunzima: abaqalayo, abaphakathi kunye nabaphambili. Ibandakanya ukupakisha izinto kwisali yedonki ngokutshintshana.
Umdlalo weHasbro-Umdlalo ...
Lo mbhobho wamanzi ngumbhobho omkhulu, unebhongo, kwaye uyasokola. Abancinci baya kufuneka babeke izixhobo kwibhanti ngokutshintshana kwaye isixhobo ngasinye siya kwenza ukuba ibhulukhwe yehle kancinci. Ukuba ibhulukhwe yakho iwe ngokupheleleyo, amanzi aya kutshiza. Lowo ungamanzisiyo uya kuphumelela.
UGoliyati Anton Zampon
Le hagu intle incinci ebizwa ngokuba ngu-Antón Zampón iya kuvavanya izakhono zabancinci. Umdlalo olula oya kubandakanya ukondla umlinganiswa de ibhulukhwe yakhe iqhume. Bangadlala ngokutshintshana kwabadlali aba-1 ukuya kwaba-6, bonwabile bejonga ukuba zingaphi iihambhega abanokuzitya ...
Thenga uAntón Zampon
UGoliyati udla imihlathi...
Lo ngomnye umdlalo webhodi wabantwana, apho ungaziqhelanisa khona nolona kuloba lumnandi. I-tuburon ilambile, kwaye iginye iintlanzi ezininzi ezincinci ekuya kufuneka uzigcine ngokuzikhupha emlonyeni wayo ngentonga yokuloba. Kodwa qaphela, kuba nangaliphi na ixesha ukrebe uya kuluma. Ngubani ngaphezulu kwezilwanyana onokugcina uya kuba nguye ophumeleleyo.
Eli Phathi lifikile, lenzelwe ngokukodwa abantwana abaneminyaka emi-4 ubudala, kunye nomxholo weDisney. Umdlalo webhodi wezinto ezininzi onokufunda ngawo kwaye wonwabe. Isetyenziselwa yonke intsapho, ikwazi ukuphumelela iimvavanyo ezininzi ukufumana amanani abalinganiswa kwi-factory fictional. Iimvavanyo zifana neQela labantu abadala, kunye neemvavanyo zokulingisa, ukudweba, njl.
Thenga Ipati & Co
Ukudlala kweHasbro-Isithuba seBhola ...
Iklasikhi engaphumi kwisitayile. Amakhulu ngamakhulu eentengiso zikamabonwakude ezisondela kwiKrismesi okanye ngamanye amaxesha xa ukuthengiswa kwezinto zokudlala kusanda. Umdlalo webhodi wabancinci apho iimvubu ezilawulwa ngabadlali abane kufuneka ziginye zonke iibhola ezinokubakho. Nabani na ofumana iibhola ezininzi uya kuphumelela.
Hasbro Gaming-Ngwenya ...
Le ngwenya lidlakudla, kodwa ngenxa yokutya kakhulu amazinyo ayo akaphilanga kwaye ifuna ukuxilongwa kwamazinyo. Khupha iimolars ezininzi kangangoko unako phambi kokuba umlomo uvale, njengoko uya kuba ufumene izinyo elenzakalisa le ngwenya inobubele. Omnye umdlalo olula okhuthaza ubugcisa kunye nokuhamba kakuhle kwabancinci.
Thenga i-Sucker Crocodile
ULúlido Grabolo Omnci.
UJunior Grabolo, ndiyadlala ...
Umdlalo omnandi webhodi yemfundo yabantwana abancinci endlwini. Inamandla kakhulu kwaye ikuvumela ukuba uphuhlise izakhono zengqondo, ukujonga, ukuqiqa, kunye nokugxila. Kulula ukuyiqonda, uqengqa idayisi kwaye kufuneka ufumane indibaniselwano ephume phakathi kwamakhadi. Ivumela imidlalo ekhawulezayo kwaye inokugqibelela ukuthatha uhambo.
Thenga iGrabolo Omnci
Umdlalo webhodi omnandi onokuthi ube yintandokazi, nokuba umntu omdala awudlale. Kuyanceda ukuphucula isigama esinxulumene norhwebo, kunye nenkxaso yentloko apho ubeka khona ikhadi elibonwa ngumntu wonke ngaphandle kwakho, kwaye kuya kufuneka ubuze imibuzo ukuzama ukuqikelela ukuba ngubani umlinganiswa ovela ekhadini. Lo mdlalo ulungele ukuphucula izakhono zemoto, ingqondo kunye neemvakalelo.
Imidlalo yebhodi yabantwana abaphakathi kweminyaka emi-6 kunye ne-12 ubudala
Kwiqela lobudala elibandakanyiweyo phakathi kweminyaka emi-6 neli-12Kukwakho nemidlalo yebhodi engaqhelekanga ehlangabezana neemfuno zolu luhlu lobudala. Ezi ntlobo zamanqaku zihlala zinemingeni enzima ngakumbi, kwaye zazisa ukukhuthazwa kwezakhono ezifana nememori, amaqhinga, ingqiqo, ugxininiso, uqhelaniso, njl. Phakathi kwezona zibalaseleyo:
IMonopoly Fortnite (Hasbro ...
I-Classic Monopoly ihlala ifana nempumelelo, kwaye ayikhe iphume kwisitayile. Ngoku kuza inguqulelo ehlaziyiweyo ngokupheleleyo esekwe kumdlalo wevidiyo weFortnite. Ke ngoko, ayizukusekelwa kwisixa sobutyebi esiphunyezwa ngabadlali, kodwa isixa sexesha abalilawulayo ukuze basinde kwimephu okanye ebhodini.
Ewe, umdlalo wevidiyo odumileyo wokudala kunye nokusinda uMinecraft ufikelele kwihlabathi lemidlalo yebhodi. Umdlali ngamnye uya kuba nomlinganiswa wakhe, kwaye aqokelele inani leebhloko zemithombo. Umbono kukulwa nezidalwa zehlabathi ngalinye. Ophumeleleyo uya kuba ngowokuqala ukugqiba ibhodi ngeetshiphusi zabo.
UHambo lokusukelana ...
Ngaba unokuthelekelela ukudibanisa ulonwabo lomdlalo odumileyo we-Trivial Pursuit trivia kunye neDragon Ball anime universe. Kulungile ngoku unayo yonke into kulo mdlalo kunye nemibuzo engama-600 malunga nesaga edumileyo ukuze ukwazi ukubonisa ulwazi lwakho malunga nabalinganiswa abathandayo.
Ubudala bukaCluedo: Ukusukela kwi-8 ...
Kuye kwenziwa ukubulawa ngendlela engaqondakaliyo. Kukho abarhanelwa aba-6, kwaye kuya kufuneka uhambe kwindawo yolwaphulo-mthetho ukuze ufumane imikhondo ekukhokelela kumbulali. Phanda, ufihle, utyhole kwaye uphumelele. Enye yezona zinto zibalaseleyo zokucinga kunye nomdlalo onomdla kwimarike.
Ukuba uthanda iimfihlakalo eziphazamisayo, lo ngumdlalo webhodi yakho. Umdlalo olula apho kufuneka uhambe kwi-maze engaqondakaliyo ukuze uzame ukufumana izinto ezilahlekileyo. Kuya kufuneka ubonise ubukhalipha bokuzama ukuphuma nezinto kwaye uhambe ngeepaseji ze-labyrinth unqanda iziphazamiso ezahlukeneyo oza kuzifumana.
Thenga iLabyrinth yomlingo
Inqaba yobugrogrisi I...
I-Atom Games iphuhlise lo mdlalo webhodi woyikekayo woyikekayo, onamakhadi angama-62 anabalinganiswa aboyikekayo kunye nezinto. Ngabo unokudlala ngeendlela ezahlukeneyo (njengomphandi, imowudi yesantya, kunye nenye imemori), ukuphucula izakhono ezincinci endlwini.
Thenga iNqaba yoBugrogrisi
I-Diset-Ipati yoMdlalo kunye nentsebenziswano ...
Olunye uhlobo lomdlalo webhodi weParty & Co odumileyo wabantwana. Uya kukwazi ukwenza amaqela kwaye wonwabe ukuphumelela iimvavanyo ezahlukeneyo. Owokuqala ukufikelela kwisikwere sokugqibela uya kuphumelela. Ukwenza oku, kufuneka uphumelele iimvavanyo zokudweba, umculo, izijekulo, iinkcazo, imibuzo, njl.
Umdlalo weHasbro weMidlalo ...
Enye yeeklasikhi, umdlalo othe wasasazeka kwihlabathi jikelele kwaye uvavanya ubuchwephesha kunye nolwazi lwe-anatomical lwabadlali. Isigulana siyagula kwaye sifuna utyando, kususwe iindawo ezahlukeneyo. Kodwa lumka, udinga ukubetha kwentliziyo kagqirha wotyando, kuba ukuba amaqhekeza achukumisa iindonga impumlo yakho iya kukhanya kwaye uya kube uphulukene… Kwaye ukuba uyawathanda amaqabane, kukwakho inguqulelo enala magama.
Hasbro Gaming ngubani, ...
Enye izihloko ezaziwa ngabo bonke. Ibhodi enye kumntu ngamnye apho kukho uluhlu lwabalinganiswa ababonakalisiweyo. Injongo kukuqikelela umlinganiswa ongaqondakaliyo wotshaba ngokubuza imibuzo kunye nokulahla abalinganiswa abangahambelani nemikhondo akunika yona.
Thenga Ngubani ngubani?
Kukho imidlalo yebhodi yabantwana engonwabi kuphela, kodwa nayo Ziyafundisa, ngoko ziya kufunda ngokudlala. Indlela yokomeleza ukufunda esikolweni ngaphandle kokubandakanya umsebenzi okruqulayo okanye odinayo kubo, nonokuba neziqulatho zenkcubeko ngokubanzi, imathematika, ulwimi, iilwimi, njl. Ezona zibalaseleyo kolu didi zezi:
Umdlalo omnandi wepuzzle wokufundisa wokuphuhlisa umbono wendawo, ukusonjululwa kwengxaki, ingqiqo kunye nemiceli mngeni eyahlukeneyo kunye nokugxila. Enye yeendlela ezilungileyo zokuphucula izakhono zokuqonda kunye nokucinga okuguquguqukayo kunye ne-gamification.
Thenga Indlu Yeziporho
Umgibe weTempile- Smart ...
Lo mdlalo webhodi yezemfundo uphucula ingqiqo, ukucinga okuguquguqukayo, ukuqonda okubonakalayo, kunye nokugxila. Unamanqanaba aliqela obunzima onokukhetha kuwo, kunye nemiceli mngeni engama-60 eyahlukeneyo. Iphazili apho amandla engqondo aya kuba ngundoqo ekudlaleni.
Thenga iTrap yeTempile
Umbala we-monster, ...
Umdlalo omangalisayo webhodi yezemfundo apho abadlali bahamba ngemibala emele iimvakalelo okanye iimvakalelo, beyenza indlela yokufunda ngokweemvakalelo kubantwana abaphakathi kwe-3 kunye ne-6 yeminyaka ubudala. Into edla ngokulityalwa ezikolweni nebalulekileyo kwimpilo yabo yengqondo nakulwalamano nabanye.
Thenga izilo zeMbala
Umdlalo olungiselelwe abantwana abangaphezulu kweminyaka emi-4 kwaye ojolise ekuphuhliseni izakhono zolwimi ngesiNgesi nangeSpanish. Ukwenza oku, sebenzisa uluhlu lwamakhadi anemifanekiso kunye namagama aya kufuneka ahambelane nomnye ukuze atshatise ngokuchanekileyo.
ISafari, uMdlalo we...
Umdlalo apho yonke intsapho inokuthatha inxaxheba, kwaye apho abancinci baya kufunda ngezilwanyana kunye nejografi. Ukuya kuthi ga kwi-72 yezilwanyana ezahlukeneyo kunye nemiyalelo kwiilwimi ezisi-7 (iSpanish, isiNgesi, isiFrentshi, isiJamani, isiTaliyane, isiDatshi kunye nesiPhuthukezi).
Imidlalo yebhodi yabantwana kunye nabantu abadala
Unokufumana imidlalo yebhodi yabantwana anokuthi umntwana adlale ngayo ekhatshwa ngumntu omdala, ingaba ngumama, utata, ootatomkhulu, abantakwenu abadala, njl. Indlela yokunyamekela eyona nto incinci yendlu kunye nokuthatha inxaxheba kwimidlalo yabo, into ebalulekileyo kubo kunye nakubantu abadala, ekubeni ikuvumela ukuba uchithe ixesha elingakumbi kwaye ubazi ngcono kancinci. Ngokuqinisekileyo xa bekhulile abayi kuwalibala loo maxesha owachitha nemidlalo efana nale:
Iphazili yama-500 amaqhekeza ...
Iphazili eneziqwenga ezingama-500 ezivela kwihlabathi leSuper Mario Odyssey Umhambi weHlabathi. Indlela yokwakha njengentsapho, efanelekileyo kubantwana abaneminyaka eyi-10 ubudala. Xa sele idibene, inemilinganiselo ye-19 × 28.5 × 3.5 cm.
Iphazili ye-3D yeSixokelelwano seSolar
IRavensburger-Iphazili ye-3D, ...
Enye indlela yokudlala kunye nokufunda ngeenkwenkwezi kukwakha le puzzle ye-3D yenkqubo yeplanethi. Iqulethe iiplanethi ze-8 ze-Solar System kunye ne-2 iplanethi indandatho, ngaphezu kweLanga, kunye neengcezu ze-522 ezinamanani zizonke. Emva kokuba iphazili igqityiwe, inokusetyenziswa njengomhombiso. Ngokumalunga nobudala obufanelekileyo, ukusuka kwi-6 iminyaka.
Thenga iiphazili ze-3D
Itafile yemidlalo emininzi
Kwitafile enye unokuba nemidlalo eyi-12 eyahlukeneyo. Inomlinganiselo we-69 cm ubude, kwaye ibhodi inobuso be-104 × 57.5 cm. Ibandakanya isethi yemidlalo emininzi eneziqwenga ezingaphezu kwe-150 kunye nemigangatho etshintshayo yokudlala ipool, ibhola ekhatywayo yetafile, ihoki, intenetya yetafile, ichess, iitshekhi, i-backgammon, i-bowling, i-shuffleboard, i-poker, i-horseshoe kunye nedayisi. Ilungele abantwana ukusuka kwiminyaka emi-6 kunye nosapho lonke. Indlela yokunceda ukuphuhlisa izakhono zemoto, izakhono zezandla, ukucinga okunengqiqo, kunye nokufunda.
Ukusukela kwi-10 leminyaka ubudala, lo mdlalo unokuba ngowona umnandi kwaye uyonwabisa usapho lonke kunye neminyaka. Ngomnye wemidlalo eyaziwayo, ukonwaba kwamagama opelo ukufumana elona nqaku liphezulu lamagama anqamlezileyo aneethayile ezisi-7 ezithathwa ngumdlali ngamnye. Enye indlela ukongeza ekuphuculeni isigama.
Imidlalo yeMattel- uMzobo ...
Ngomnye umdlalo owaziwayo, inguqulelo yomdlalo womzobo wakudala apho kuya kufuneka uzame ukubenza baqikelele ukuba yintoni na ofuna ukuyichaza ngemizobo yakho. Kufuneka idlalwe ngokwamaqela, kwaye iya kukukhokelela kwiimeko ezimnandi kakhulu, ngakumbi kunye naloo malungu anezakhono zokuzoba iPicasian ...
Yibethe loo nto!
Yibethe loo nto! -I...
Ngomnye wale midlalo yebhodi eya kukwenza ukuba uhambe kwaye wenze zonke iintlobo zovavanyo oluphambeneyo. Imiceli mngeni eyoyisayo, kunye novavanyo oluhlekisayo oluyi-160 apho kuya kufuneka uvuthele, ulinganise, ujuxuze, utsibe, uqhume, njl. Ukuhleka kungaphezu kokuqinisekiswa.
Thenga Beat That!
Iintsuku zeMmangaliso-Eyokuqala ...
Enye yaloo midlalo ithandwa ngabancinci kodwa ifanele usapho lonke. Kwabo banomphefumlo wabahambi kwaye bangene kolu hambo lukaloliwe olukhawulezayo ukutyhubela izixeko eziphambili zaseYurophu kwimephu enkulu apho baya kukuvavanya khona. Umdlali ngamnye kufuneka aqokelele imithwalo yenqwelo yokwakha iindlela ezintsha kunye nokwandisa uthungelwano lukaloliwe. Nabani na ogqiba amatikiti kwindawo yokufikela uyawuphumelela umdlalo.
Ukuba uyayithanda imidlalo egxile ekwenzeni ukuba uhleke, le yenye yezo. Dlala nosapho lonke kunye nabahlobo, ngamanqanaba ama-3 ezakhono ezahlukeneyo. Kuyo kuya kufuneka wenze ukulinganisa ngokukhawuleza ukuzama ukubenza bakuqonde, kunye nerepertoire ebanzi enamakhadi angama-320.
Lo mdlalo webhodi ukubuyisela kwinkulungwane yamashumi amabini, phakathi kokuhlola. Umdlalo we-adventure apho isiqithi esingaqondakaliyo sifunyanwa embindini wolwandle kwaye intsomi yayo ithi ifihla ubutyebi. Kodwa abahambi kuya kufuneka bajongane nezithintelo ezahlukeneyo, izilo ezikhulu zaselwandle, kunye ... nentaba-mlilo egqabhukileyo eya kubangela ukuba isiqithi sizike kancinci kancinci.
ICarcata-umdlalo weBhodi kunye ...
I-Carcata ixuba i-adventure kunye neqhinga. Kuyo kuya kufuneka ubeke isizwe sakho kwisiqithi esinentaba-mlilo kwaye ubonise esona sizwe sinamandla asindayo kwiingozi ezigcinwe kule ndawo. Khusela iindawo zakho, ubeke iliso kwintshukumo yezizwe ezichasayo, uqhubele phambili, uqokelele amatye anqabileyo, kwaye uhlale ujonge umoya okhusela isiqithi ...
Isikhokelo sokuthenga umdlalo webhodi kubantwana
Umfanekiso wasimahla (umdlalo webhodi yabantwana iDabi loLwandle) ukusuka https://torange.biz/childrens-board-game-sea-battle-48363
Ukukhetha umdlalo webhodi akuyona into elula, kuba kukho iindidi ezininzi kunye nezihloko eziqaliswa kwimarike. Kodwa ukukhetha umdlalo webhodi kubantwana kunzima ngakumbi, kuba ezinye izinto kufuneka zithathelwe ingqalelo. ngenxa yokhuseleko lomntwana:
Imidlalo yebhodi yabantwana idla ngokuza nesalathiso se ubuncinane kunye nobudala obuphezulu ekujoliswe kuko. Isatifikethi esibenza basebenze kwelo qela lobudala ngokusekwe kwiikhrayitheriya ezingundoqo ezintathu:
Khu seleko: umzekelo, abantwana abancinci banokuginya amaqhekeza afana nedayisi, iimpawu, njl., ngoko ke imidlalo yaloo minyaka ayiyi kuba nezi ntlobo zamaqhekeza. Kubalulekile ukuba imveliso ibe nesatifikethi se-CE, ukwazi ukuba iphumelele imigangatho yokhuseleko ye-EU. Zilumkele izinto zomgunyathi kunye nezinye izinto zokudlala ezifika zivela eAsia ngaphandle kolu lawulo ...
ZakhonoAyiyiyo yonke imidlalo enokuthi ibe yeyiphi na iminyaka, eminye ayinakulungiselelwa abancinci, kwaye inokuba nzima okanye ingenzeki, kwaye igqibele ngokukhungatheka kwaye iwuyeke umdlalo.
Umxholo: umxholo nawo ubalulekile, ekubeni eminye isenokuba nemixholo engqalileyo kubantu abadala nengabafanelanga abantwana, okanye ngokulula nje iqela elithile lobudala alilithandi kuba lingayiqondi.
Olu phawu alubalulekanga, kodwa ewe kubalulekile. Kuyakhuthaza ukwazi izinto ezincasa kunye nezinto azikhethayo umamkeli womdlalo, kuba banokuthanda uhlobo oluthile lomxholo (isayensi, imfihlakalo, ...), okanye bathanda umboniso bhanyabhanya okanye uthotho lukamabonakude (Ibali leToy. , Hello Kitty, Dragon Ball, Rugrats,…) enemidlalo eya kukukhuthaza kakhulu ukuba uyidlale.
Olu phawu aluhambelani kuphela nexabiso, kodwa kunye nokhuseleko lomdlalo (hayi iqhekeza libe ngamaqhekeza amancinci anokubangela ukuminxa, iziqwenga ezibukhali ezibangela ukulimala ...) ukuqina. Eminye imidlalo inokuthambekela ekubeni iqhawuke okanye iphele ngokukhawuleza, ke le yinto ekufuneka uyigcine.
Ukuphatheka kunye nocwangco
Enye into ebalulekileyo kukufumana umdlalo ongena ibhokisi okanye ibhegi apho unokugcina onke amalungu. Izizathu zokunikela ingqalelo koku zezi:
Ukwenzela ukuba umntwana omncinci akwazi ukuyithatha ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye ngokulula.
Musa ukulahlekelwa ngamaqhekeza.
Khuthaza ucwangco xa umdlalo uphela ngokummema ukuba athathe.
Oko kunokugcinwa ngokulula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » ngokubanzi » Eyona midlalo ilungileyo yebhodi yabantwana